သောသီခို: "မြန်မာ့တရားရေးကို စိန်ခေါ်လာတဲ့ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု"
"မြန်မာ့တရားရေးကို စိန်ခေါ်လာတဲ့ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု"
"ဒုတိယမြောက် မုဒိမ်းကျင့်သူ ဆေးကျောင်းသား ရဲမင်းဦးဆိုသူသည် ဆွေမျိုးများ၏ အကူအညီဖြင့် ယခုအခါ သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်"
2013 ဧပြီလ လောက်က ဆေးဖက်ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ဟာ ဘုရင့်နောင်တံတားပေါ်က ခုန်ချပြီး သတ်သေသွားတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီကျောင်းသူလေးနာမည်က နော်မေသူသူဇော်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၉ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ နော်မေသူသူဇော် ရဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူက ရဲမင်းဦးလို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်မလေးသေတဲ့နေ့က သူဟာ သူ့ချစ်သူ ရဲမင်းဦးနဲ့ လျှောက်လည်ရာက ပြန်လာပြီး စော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ မှော်ဘီကို ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပြန်သွားတယ်လို့ ရဲမင်းဦး က စစ်ချက်ပေးပါတယ်။ မေသူဇော်ရဲ့ လွယ်အိတ်ကို ဘုရင့်နောင် တံတားပေါ်မှာ လေညှင်းခံ ထွက်လာတဲ့ ရွာမရပ်ကွက်က မိန်းခလေးသုံးယောက်မှ ည ၈ နာရီအချိန်မှာ တွေ့ခဲ့တာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
ဇော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ မှော်ဘီကို သူ့ရည်းစားရှေ့မှာ ပြန်သွားတဲ့ မိန်းခလေးဟာ ဘုရင့်နောင်တံတားပေါ်မှာ ည ၈ နာရီမှာ ဘယ်လို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေမလဲ ???
ဇော်ဘွားကြီးကုန်းနဲ့ ဘုရင့်နောင်ဆိုတာ ဆန့်ကျင့်ဘက်ပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ သေဆုံးသူ မိန်းခလေးဟာ ဇော်ဘွားကြီးကုန်းကလာပြီး ခရေပင်လမ်းခွဲမှာ ဆင်း၊ တက္ကစီဌားပြီး ဘုရင့်နောင်တံတားကိုလာပြီးမှ လွယ်အိတ်ကို တံတားမှာ ချပြီး မြစ်ထဲကို ခုန်ဆင်းသတ်သေတယ်လို့ ယူဆပါသတဲ့။
စော်ဘွားကြီးကုန်းကနေ ခရေပင်လမ်းခွဲကို ဟိုင်းလတ်စီးရင် အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်နဲ့ ဆယ်မိနစ်ကြာပါတယ်။ ခရေပင်လမ်းခွဲက ဘုရင်နောင်တံတား - ပေါက်တောဝကို တက္ကစီ ဌားရင်လည်း အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်က နာရီဝက်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။ အင်းစိန်ပန်းခြံကစပြီး ဂုံးတံတား၊ အင်းစိန်ဈေး၊ ပေါက်တောဝ မီးပွိုင့်အထိ လမ်းတောက်လျှောက် ပွင့်နေတာတောင် ငါးမိနစ်က ဆယ်မိနစ်လောက်ထိကြာပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ည ၇ နာရီ ၄၅ မှာ ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲလာတဲ့ မိန်းခလေး ည ၈ နာရီမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘုရင့်နောင်တံတားမှာ သတ်သေတယ်ဆိုတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား ???
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အလောင်းပေါ်လာတယ်။ ရဲက နှစ်ရက်ထားပြီးတော့ ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုပြီး သဂြိုလ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆေးရုံက သုံးရက်ထားမယ့်ဟာကို ရဲက အမိန့်စာထုတ်ပြီး သဂြိုလ်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့မှ ရဲမင်းဦးအိမ်က အရင်သိပြီး ကောင်မလေးအိမ်ကို အကြောင်းကြားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကောင်မလေး တံတားမှာ ချန်ခဲ့တဲ့ အိတ်နဲ့ဖိနပ်။ အိတ်မှာ ကောင်မလေးရဲ့ ကျောင်းသားကတ်ဒ် ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားကတ်ဒ်ထဲမှာ နေရပ်လိပ်စာလည်း ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးကို ပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုပြီး သဂြိုလ်လိုက်ပါတယ်။
ဆေးစာကို ရေးတာက အင်းစိန်က မူ့ခင်းဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ရဲဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးစာမှာတော့ ကောင်မလေးမှာ ပြင်ပဒဏ်ရာ မတွေ့ရပဲ အဆုတ်ထဲရေ၀င်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးဟာ အပျိုစစ်စစ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အပျိုမှေးတောင် မပျက်စီးတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေးတဲ့ ပုံ မဟုတ်ပဲ မိသားစုက စုံစမ်းပြီးရထားတဲ့ အလောင်းဘေးတိုက်ပုံ ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ကျောမှာ သွေးစွန်းနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အနီကွက်ကို တွေ့ရသလို၊ ရဲ ကပေးတဲ့ ပုံမှာလည်း လက်ဝဲဘက် လက်ကျိုးနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
မူ့ခင်းဆရာဝန်ကြီးက အပျိုစစ်စစ်လို့ ထွက်ချက်ပေးပေမယ့် သေဆုံးသူရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ သူ့ရည်းစား ရဲမင်းဦးနဲ့ ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေခ်ျ့တွေမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ရည်းစားနဲ့ လွန်ကျုးထားတယ်လို့ တွေ့ရှိရပြီး ကောင်မလေးဟာ တားဆေးစားနေရပါသတဲ့။
တားဆေးစားနေရတဲ့ မိန်းခလေးဟာ အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်ပါ့မလား ??? အမှုရှုပ်ထွေးလာပါပြီ။ ဒါဆိုဘာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီး၊ တရားသူကြီးတွေက ဒီလိုသံသယ၀င်စရာတွေကို သတိမပြုခဲ့ပါသလဲ ???
ဆေးကျောင်းသား ရဲမင်းဦးရဲ့ ဖခင်ဟာ GE(အင်ဂျင်နီယာ) တပ်က အရာခံဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ GE တပ်က ဆာဂျင်တွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ ဘယ်လောက် ပိုက်ဆံရတယ်၊ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ နီးစပ်သူတွေ သိကြမှာပါ။
ဒါတင်မကပဲ ရဲမင်းဦးနဲ့ သေဆုံးသူကောင်မလေးတို့ဟာ အဲ့ဒီနေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ Junction Square တို့ကို လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသတဲ့။ တိတိကျကျဆို ရဲမင်းဦ သူ့
ဒါပေမယ့် ရဲမင်းဦးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ အဲ့နေ့က သေဆုံးသူကောင်မလေး ၀တ်တဲ့ ဂါဝန်နဲ့ အရောင်ကိုပါ သိကြပါသတဲ့။ ဒီအကြောင်းကို သေဆုံးသူကောင်မလေးအိမ်က ရဲမင်းဦးနဲ့ သူ့အပေါင်းအသင်းများက ကောင်မလေးကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသလို ဇတ်လမ်းဆင်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး သံသယဖြစ်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ကောင်မလေး အလောင်းပေါ်တဲ့ လှိုင်မြစ်ကမ်းနဲ့ နှစ်လမ်းအကွာမှာ ရှိတာကတော့ လူသတ်သမားလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ချစ်သူ ရဲမင်းဦး ရဲ့ အိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဒီလို သံသယတွေ၊ ထောက်ပြစရာတွေ လျို့ဝှက်ချက်နေတဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ အမှုကို လူသေမှုဆိုပြီး အမှုပိတ်လိုက်တာဟာ ရဲတပ်ဖွဲရဲ့ စွမ်းရည်ကို ဝေဖန်စရာဖြစ်နေပြီး၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်နဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်လာကြပါတယ်။ လူအများစုကတော့ မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးကို ကိုင်လှုပ်လာမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေကြရင်း။
ဆေးကျောင်းသူ ၁ ဦး (နော်မေသူသူဇော် အသက် ၁၉ နှစ် ဘ-ဦးဇော်ထွန်း) အား ဆေးကျောင်းသားတစ်စုမှ မုဒိမ်းကျင့် မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်သည့် အမှုမှန် မပေါ်ပေါက်ပါက ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများ အားလုံး ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသားကဒ်များကို ဆုတ်ဖြဲ၍ ကျောင်းမတက်ပဲ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမည်
ဆေးကျောင်းတွင် ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဆေးကျောင်းသားတစ်စုမှ အဖွဲ့လိုက် မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သော်လည်း တရားစီရင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကြောင့် တရားခံများမှာ အမှုမှလွတ်မြောက်လျက်ရှိရာ သေဆုံးသူ ဆေးကျောင်းသူလေး၏ အမနှင့် သူမ၏ သူငယ်ချင်းများမှ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယမြောက် မုဒိမ်းကျင့်သူ ဆေးကျောင်းသား ရဲမင်းဦးဆိုသူသည် ဆွေမျိုးများ၏ အကူအညီဖြင့် ယခုအခါ သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Aye Chan Mon# Credit To :Myanmar Celebrities> ပြန်လည် မျဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်
Posted by PKD at 11:01 PM
Hsa Tu said...
don't worry if he came Australia i'll go to kill him. Show me his photo please! ok!!
let the government know and they won't accept people like that easily..
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်
အရင်နှစ်တွေထက် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ၆၅ နှစ်မြောက်...
၆၅ နှစ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ (ကရင်အမျိုးသား အ...
DVB - အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမူကြမ်း ဦးအောင်မင်းသုံးသပ်
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ NCCT တွေ့ဆုံပွဲ
ကရင်လူငယ်ဆွေးနွေး ပွဲ ကော့ကရိတ်မှာ ကျင်းပ
Is Naypyidaw Learning From Sri Lanka to End Civil ...
ဦးဆိုင်ပေါင်နပ်ပြောတဲ့ UWSA သဘောထား
DKBA နှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့...
ဆေးကျောင်းသူ နော်မေသူသူဇော် သေဆုံးမှု နောက်ဆက်တွဲ ...
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချူပ်ြ...
၆၅ နှစ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ တွင် KYO ကရင်လူင...
၆၅ နှစ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ တွင် ကရင်အမျိူး...
"မြန်မာ့တရားရေးကို စိန်ခေါ်လာတဲ့ နော်မေသူသူဇော် သေဆ...
လော်ခီးလာညီလာခံ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (အသံဖိုင်)
လော်ခီးလာ တိုင်းရင်းသားညီလာခံ (ရုပ်သံ)
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းမျာ...
တိုင်းရင်းများညီလာခံ စတုတ္တမြောက်နေ့- (လော်ခီးလာ ...
ဘားအံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထို...
လူ့ အခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားစွမ်းဆောင်ရင်း လူ့ အခွ...
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသားများညီလာခံ - ဒုတိယေ...
ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ၏ ကွ...
လော်ခီးလာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ညီလာခံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကရင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ် (ရုပ်သံ)
လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ၏ ဒုတိယ အကြိမ် ...
တအာန်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ နို...
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် မွန်ကရင် သတ်မှတ်ချက်...
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ညီလာခံမှ ရွေးကောက်ခံခေါင...
နာယကကြီး မန်းသိန်းရွှေ ရဲ့ ဩဝါဒစကား အစအဆုံး - ကရင်...
ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေ...
အစိုးရစစ်တပ်မှ ရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်သည်...
၂၇၅၃ ခုနှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အမှာစကား - စောကနဲမီ ...
၂၇၅၃ ခုနှစ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အမှာစကား - ရန်ကုန်တိ...
Ethnic Karen National’s Position Statement on 2014...
ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါ...
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (စာအုပ်အပြည့်အစုံ)
ဗမာပြည်မှာ ကျင်းပမည့် သန်းခေါင်းစာရင်းကို ကရင်တွေ ...
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ထုတ်ပြန်ချက် (အမ...
ဗမာစစ်တပ်များ ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေအတွင်း စစ်ရေ...
2753 Karen New Year in Rochester (Part-1)
ဒီတခါလည်း လှလှပပ very beautiful ပဲ !!!!!!!
အစိုးရနှင့်တအာင်းတပ် တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်
သမ္မတနဲ့ KNU တွေ့ဆုံ
ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် - နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြိူ...
KNU ၏ သမ္မတ တွေ့ဆုံရေး ခရီးစဉ် အတွက် ဆက်သွယ် မေးမြန...
နိုင်ငံရေးသမား ရောင်းရန်ရှိသည် - အပိုင်း ၁ + ၂
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချ...
Karen New Year in Myawadi - ကုက္ကုလ်မြိုင်
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ကေအိုင်...
မဲလဘုန်းမြို့ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
DVB - ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွ...
DVB - မုံရွာမြို့က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် သတင်းမြင်...
DVB - ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ရန်ကုန်မြို့မ...
ဖူးတကူ ရဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူး သ၀ဏ်လွှာ
ကရင်နှစ်သစ်ကူး ကဗျာ (ဖူးလူသော)